ထူးချွန်သူတစ်ဦးဖြစ်စေဖို့ စာလေ့လာရာမှာ ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အကျင့်ဆိုး (၁၁) ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ • POINT
၁. ကြိုတင်အစီအစဉ် မဆွဲဘဲ လေ့လာခြင်း။
စာစမလေ့လာခင်မှာဘယ်အရာတွေကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်မယ် ၊ စာဘယ်နှစ်ရွက်ပြီးအောင် လေ့လာမယ်ဆိုပြီးပုံကြမ်းရေးဆွဲတဲ့အကျင့် ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
၂. အချိန်ကပ်မှ လုပ်ဆောင်ခြင်း
အလုပ်ပြီးအောင်လုပ်ရမယ့်နေ့ကိုချရေးပါ။ တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်လုပ်မယ်၊ဆိုပြီး ခွဲဝေသတ်မှတ်ပါ။ အလုပ်တင်ရမယ့်နေ့ မတိုင်ခင် တစ်ပတ်အလိုမှာ အချိန်ဇယားဆွဲပြီး စလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ အလုပ်တွေစုပုံလာခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးက ဘယ်အချိန်မှာ သင်ယူမှု အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ လေ့လာပါ။ အချို့ကျောင်းသားတွေက မနက်ဘက်မှာ လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်း မြင့်ပေမယ့် အချို့ကတော့ ညဘက်မှာ လေ့လာနိုင်စွမ်းမြင့်ကြပါတယ်။
၄။လူမှုကွန်ယက်social mediaတွေနဲ့ ဖုန်းတွေရဲ့ အာရုံဖမ်းစားမှုမှာ နစ်မြောနေခြင်း
ဖုန်းနဲ့ social mediaဖြစ်တဲ့ facebookအစရှိတာတွေကို စာလေ့လာခြင်းမပြီးခင် မကြာခဏစစ်ဆေးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၅။တယ်လီဗေးရှင်း ရှေ့တွင် စာလေ့လာခြင်း
အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းစေဖို့ အိမ်ရဲ့ လူသွားလူလာနည်းတဲ့ နေရာကိုရွေးချယ်ပြီး စာကြည့်ခန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါ။ အိပ်ခန်းဟာနားနေဖို့အတွက်သာ သင့်တော်တဲ့အတွက် တတ်နိုင်သလောက် အိပ်ခန်းမှာ စာဖတ်ခြင်းကနေ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၆။စာမေးပွဲဖြေမယ့် တစ်ရက်အလိုညရောက်မှ စာအသေကျက်မှတ်ခြင်း
စာကိုနည်းနည်းစီ စောစောကြိုတင်လေ့လာပါ။ စာကြည့်ချိန်ကြာကြာပေးခြင်းဟာ အချက်အလက်တွေမှတ်ယူဖို့ လွယ်ကူစေပါတယ်။ စာကြည့်ချိန်များများရတဲ့အတွက် မပိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သေချာကြည့်ဖို့ အချိန်ပိုထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညတိုင်း သင့်ကလေးကို အချိန်ပေးပြီး အတန်းထဲတွင် လေ့လာခဲ့သည်များကို မှတ်မိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ နားမလည်သည့်အချက်များကို ဆရာမအား မေးနိုင်အောင် မှတ်စုထုတ်ရေးတဲ့အကျင့် မွေးမြူပေးပါ။
၈။နားလည်အောင်ထက် မှတ်မိအောင်သာ သင်ယူခြင်း
စာမေးပွဲဖြေဖို့ စာမှတ်ခိုင်းတာထက် သင်ယူထားတဲ့အရာတွေကို အချင်းချင်းချိတ်ဆက်အသုံးပြုတတ်အောင် အားပေးသင်ကြားပါ။ ပိုမိုနားလည်အောင် ဆက်သွယ်ချက်လေးတွေ ပြုလုပ်သင်ကြားပေးပါ။
Assignment တင်ရမယ့်နေ့တွေ၊ စာမေးပွဲရက်တွေ၊ အိမ်စာတင်ရမယ့် နေ့စွဲတွေကို ချရေးခိုင်းပြီး ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မှတ်မိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါ၊ သို့မှသာ အချိန်မှီအလုပ်ပြီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်စုတွေကို ဘာသာရပ်အလိုက် ခွဲထားပါ၊ ပိုမိုထိရောက်တဲ့မှတ်စုတွေ ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီး အသင့်လျော်ဆုံးနည်းဖြင့် မှတ်စုထုတ်ခိုင်းပါ။
ထုူးချွန်တဲ့ကျာင်းသားတွေဟာ အမှားကနေ ပြန်လည်သင်ယူကြပါတယ်။
စာမေးပွဲမှာ ရလဒ်ကောင်းမရခဲ့ရင် အဲ့ဒိအတွေ့အကြုံကို သင်ခန်းစာယူပြီး နောက်တစ်ကြိမ်မှာ တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းပါ။
စာစမလေ့လာခင်မှာဘယ်အရာတွေကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်မယ် ၊ စာဘယ်နှစ်ရွက်ပြီးအောင် လေ့လာမယ်ဆိုပြီးပုံကြမ်းရေးဆွဲတဲ့အကျင့် ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
၂. အချိန်ကပ်မှ လုပ်ဆောင်ခြင်းအလုပ်ပြီးအောင်လုပ်ရမယ့်နေ့ကိုချရေးပါ။
တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်လုပ်မယ်၊ဆိုပြီး ခွဲဝေသတ်မှတ်ပါ။ အလုပ်တင်ရမယ့်နေ့ မတိုင်ခင် တစ်ပတ်အလိုမှာ အချိန်ဇယားဆွဲပြီး စလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ အလုပ်တွေစုပုံလာခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးက ဘယ်အချိန်မှာ သင်ယူမှု အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ လေ့လာပါ။ အချို့ကျောင်းသားတွေက မနက်ဘက်မှာ လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်း မြင့်ပေမယ့် အချို့ကတော့ ညဘက်မှာ လေ့လာနိုင်စွမ်းမြင့်ကြပါတယ်။
အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းစေဖို့ အိမ်ရဲ့ လူသွားလူလာနည်းတဲ့ နေရာကိုရွေးချယ်ပြီး စာကြည့်ခန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါ။ အိပ်ခန်းဟာနားနေဖို့အတွက်သာ သင့်တော်တဲ့အတွက် တတ်နိုင်သလောက် အိပ်ခန်းမှာ စာဖတ်ခြင်းကနေ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၆။စာမေးပွဲဖြေမယ့် တစ်ရက်အလိုညရောက်မှ စာအသေကျက်မှတ်ခြင်း
စာကိုနည်းနည်းစီ စောစောကြိုတင်လေ့လာပါ။ စာကြည့်ချိန်ကြာကြာပေးခြင်းဟာ အချက်အလက်တွေမှတ်ယူဖို့ လွယ်ကူစေပါတယ်။ စာကြည့်ချိန်များများရတဲ့အတွက် မပိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သေချာကြည့်ဖို့ အချိန်ပိုထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညတိုင်း သင့်ကလေးကို အချိန်ပေးပြီး အတန်းထဲတွင် လေ့လာခဲ့သည်များကို မှတ်မိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ နားမလည်သည့်အချက်များကို ဆရာမအား မေးနိုင်အောင် မှတ်စုထုတ်ရေးတဲ့အကျင့် မွေးမြူပေးပါ။
Assignment တင်ရမယ့်နေ့တွေ၊ စာမေးပွဲရက်တွေ၊ အိမ်စာတင်ရမယ့် နေ့စွဲတွေကို ချရေးခိုင်းပြီး ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မှတ်မိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါ၊ သို့မှသာ အချိန်မှီအလုပ်ပြီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်စုတွေကို ဘာသာရပ်အလိုက် ခွဲထားပါ၊ ပိုမိုထိရောက်တဲ့မှတ်စုတွေ ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီး အသင့်လျော်ဆုံးနည်းဖြင့် မှတ်စုထုတ်ခိုင်းပါ။
ထူးချွန်တဲ့ကျာင်းသားတွေဟာ အမှားကနေ ပြန်လည်သင်ယူကြပါတယ်။စာမေးပွဲမှာ ရလဒ်ကောင်းမရခဲ့ရင် အဲ့ဒိအတွေ့အကြုံကို သင်ခန်းစာယူပြီး နောက်တစ်ကြိမ်မှာ တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းပါ။